फेसबुकमा लेख्दै करिष्मा मानन्धरले डा सुरेन्द्र केसीलाई हपार्दै भनिन् ‘मुख सम्हालेर बोल्नुस्’ – PathivaraOnline
Home > समाज > फेसबुकमा लेख्दै करिष्मा मानन्धरले डा सुरेन्द्र केसीलाई हपार्दै भनिन् ‘मुख सम्हालेर बोल्नुस्’
काठमाडौं, १४ साउन र राजनितिक विश्लेषक डा सुरेन्द्र केसीलाई अनौठो फसाद परेको छ । एक अन्तवार्तामा डा केसीले बोलेका कुरालाई लिएर नायिका करिष्मा मानन्धरले केसी कडा आपत्ती जनाएकी छिन् । करिष्मको श्रीमानको विषयमा बोले पछि डा केसीलाई फसाद परेको छ । करिस्माले मुख सम्हालेर बोल्न केसीलाई चेतावनी दिएकी छिन् । करिष्माका पति विनोद मानन्धरले डा केसी सँगको भेटमा आफुलाई करिष्माको पति भनेर परिचय गराएको प्रसंग सुनाउँदै डा केसीले विनोदले करिष्माको नाम बाट चिनाउँनु पर्नु नै उनको इज्जत जानु हो भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । अहिले आफ्नो त्यहि बोली डा केसीलाई महंगो परेको छ ।
आफ्नो फेसबुकमा मंगलवार एक स्टाटस लेख्दै उनले सो प्रश्न गरेकी हुन्। उनले डा। केसी जस्तो विद्वान मानिसबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु आफ्नो अन्दाज भन्दा परको कुरा भएको उल्लेख गरेकी छन्। यदि करिश्मा केसीले आफ्नो जात बद्लेर करिश्मा मानन्धर गर्न सक्छ भने बिनोदजीले म करिश्मा मानन्धरको श्रीमान भन्दा के बेइज्जत भयो रु करिष्माको प्रश्न छ। त्यसैगरी स्टाटसमा करिष्माले आफ्ना पति बिनोद डा। केसी भन्दा कुनै कुरामा कम नभएको उल्लेख गर्दै आफू राजा जस्तो भएर हिँड्न खोज्ने मानिसले आफ्नी श्रीमतीलाई रानी जस्तो व्यवहार गर्ने बताइन्। बिनोद मानन्धर तपाईंको तुलनामा कुनै कुरामा कम छैन । सबैभन्दा ठुलोकुरा उहाँमा मानवता छ र उहाँले तपाईंले जस्तो अरुको नचाहिने जजमेन्ट गरेर अरुको बारे गलत व्याख्या गर्नुहुन्नु, करिष्माले लेखेकी छिन्। यस्तो छ करिष्माले डा केसीलाई प्रहार गर्दै लेखेको कडा स्टाटस
डा सुरेन्द्र केसी विश्लेषक, बोलिरहनु हुन्छ , तर कहिलेकाही के बोल्नु हुन्छ के !!! त्यो वाहाको बोलाइको आधारमा वहाको व्यक्तित्व आन्दाज गर्न मुस्किल जस्तो !! हालै एउटा अन्तरवार्तामा वाहाले भन्नू भयेको रहेछ कि सिनेमाका व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यबहार र आचरणका कारण आफुलाइ निम्न स्तरमा पारेका छन र उदाहरण दिदा मेरो श्रीमान बिनोद जी को नाम लिनुभएको रहेछ ।
पोखरामा बिनोद जीले वहालाई देखेपछि आफै गएर भेट्नु भयोरे अनि म करिश्माको श्रीमान भन्नू भयो रे तेस्ले बिनोद जी ले आफ्नो इज्जत घटाउनु भयो रे !! वाहाले म बिनोद मानन्धर भनेर किन नचिनाएको रे एस्ता त छन अनि के इज्जत हुनुरे ! (बिनोद मानन्धर, ईश्वर मानन्धरको इतिहास हेर्नुस् अलिकति) येदि करिश्मा के। सी ले आफ्नो जात बद्लेर करिश्मा मानन्धर गर्न सक्छ भने बिनोद जी ले म करिश्मा मानन्धरको श्रीमान भन्दा के बेइज्जत भयो र ? वाहाजस्तो व्यक्तित्व बाट मैले यो आसा गरेको थिइन ।
जबकी जब बिनोदजी पोखराबाट फर्किनु भयो कस्तो उत्साहित भयेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो र भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले पोखरामा डा। सुरेन्द्र के । सी लाई भेटेनी , म आफै बोल्न गए , बिनोद जील ले सुरेन्द्र के।सी को सबै अन्तरवार्ता फलो गर्नुहुन्छ र वाहाको भनाइ मनपराउनु हुन्छ, बिनोद जी ले आफ्नो परिचय दिदा करिश्माको श्रीमान भनेको ले बिनोद जी कसरी इज्जत बिहिन हुनुभयो डा । के सी ? जो मानिस आफू राजा जस्तो बनेर हिड्न चाहान्छ नि उस्ले आफ्नो श्रीमतीलाई रानी सरहको व्यबहार गर्छ ।
अनि जो मानिस तपाईंको अगाडि सम्मानका साथ झुकेर बोल्न आउँछ नि त्यो उस्को कमजोरी होइन त्यो उस्को बडप्पन हुन्छ । त्यहि बेला तपाई , बिनोद र मेरि छोरी कविताको युटुब कुराकानी जब मेरो छोरिले सेयर गरन ममि भन्दा मैले गरिन, त्यो कुरामा कबु म संग रिसाएको थियो !! त्यो तपाईं प्रती उस्को सम्मान थियो बुझ्नुभयो १ तर त्यो कुराकानीमा मेरो परिवारको साधारण पन देखेर तपाईंको आनुहारको बेवास्ता मैले पढेकोले त्यो सेयर गरिन । आफ्नो ज्ञानलाई दम्भ होइन हजारौं नबलेका दियो बाल्ने ज्योती बनाउनुस । बिनोद मानन्धर तपाईंको तुलनामा कुनै कुरामा कम छैन । सबैभन्दा ठुलोकुरा उहाँमा मानवता छ र उहाले तपाईंले जस्तो आरुको नचाहने जजमेन्ट गरेर अरुको बारे गलत व्याख्या गर्नुहुन्न । अब आइन्दा बोल्दा विचार गर्नुहोला । सबैले सहदैनन। हामीले तपाईंको केही खाएको छैन ।
हुम्लामा महिलालाई एक युवकले यस्तो गर्न खोज्दा महिलाले ठूलो स्वरमा पछि ….